eNasha.com - राजधानीको एक दिन
राजधानीको एक दिन
राजधानीको लमतन्न सडकमा कुन दिन के हुन्छ, बटुवालाई थाहा हुँदैन । यहाँका सवारी (घोडा र साइकलबाहेक) कुन बेला कहाँ अड्किने हुन्, पत्तो हुन्न । मान्छेले एउटा योजना बनाउँछ र आफ्नै गतिमा हिँड्छ । त्यस्तै योजना र गतिमा म बिहान ठीक १० बजे इनशाडटकमको कार्यालय जान भनी बानेश्वर चोकमा उभिएँ । हेर्दा त चकित, पूरा सडक (चौडाइ) छपक्क छोप्ने गरी एउटा ब्यानर ठड्याइएको छ । केही समययता पूर्वपश्चिम राजमार्गमध्ये चूरेभावर प्रदेशका लागि मधेशी जनअधिकार फोरमसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हिसाबमा उसले बन्दमाथि बन्दको घोषणा गरेर चर्चा कमाइसकेको छ । त्यसैले राजधानीमा तिनको नाम सबैलाई मुखाग्र छ, किनभने अखबारले पनि तिनलाई लोकप्रिय बनाउन पहिलो पृष्ठमा राम्रै ठाउँ दिँदै आएका छन् । तिनले यातायात ठप्पको घोषणा गरेका रहेछन् ।
नयाँ बानेश्वरको चोकमा उभिएर यस्सो भीँड तिर हेर्दैगर्दा एउटा जुँगाको रेखी नबसेका युवाले एउटा पर्चा मतिर तेर्‍स्याए । खोलेर हेरेँ । लेखिएको थियो- खुल्ला पत्र ।
यो खुला पत्र हेर्नै घिन लाग्यो, कारण के थियो भने मलाई कार्यालय जान हतार भइसकेको थियो । त्यहाँ मैले गायक रामभक्त जोजिजु र उनकी गायिका पत्नी इतुलाई बोलाएको थिएँ । तिनले भर्खरै नयाँ गीति एल्बम चयन निकालेका थिए । आधुनिक गायनमा ती दुइ जोडीको राम्रो नाम छ । तिनलाई इनशाडटकमजस्तो विश्वभर पढिने वेबपोर्टलले ठाउँ दिनुपर्छ भन्ने लागेर मैले ठीक १०:३० मा बोलाएको थिएँ । तर मलाई डर थियो, म समयमा नआइपुगुँला र तिनले आफूलाई अपमानित ठान्लान् ।
खुलापत्रलाई त्यसैकारण नपढी गोजीभित्र खस्काएँ । र, आफूलाई चाहिने तश्वीरहरुलाई झप् झप् खिचेँ ।
त्यहाँ धेरैको बिजोग देखेँ । कोही घर सर्दै गरेका थिए, गाडीभर टम्म सामान थिए । कुनै व्यापारीको बोराका बोरा एक गाडी आलु कुनै सब्जी भण्डारमा लैजान अलपत्रजस्तै भएर अड्किरहेको थियो । कुनै गाडी उत्तर तेर्‍सिएका, कुनै दक्षिण ।
त्यसपछि त्यो मेरो मोबाइलको घण्टी टन्टनाएर बज्यो, उठाएँ । रामभक्तले सम्झेका थिए । मैले उनलाई अलि ढिला हुनसक्ने र बरु अलि ढिला नै अफिसमा आइपुग्न अनुरोध गरेँ । अफिस आइपुगेपछि मैले रामभक्त र इतुलाई स्वागत गरेँ । सानो समाचार तिनबाट टिपोट गरिसकेपछि मैले बिहानको घटना सम्झिएँ र लाग्यो आजको दिन समाचारको महत्व बानेश्वरको भीड नै हो । इतु र रामभक्तलाई भोलिको प्राथमिकतामा सार्दा फरक पर्दैन, तिनले मलाई गलत सम्झने छैनन् ।
चुरे भावरको यातायात अवरुद्ध सम्झने बित्तिकै बिहान दिएको एउटा पर्चा याद आयो । खल्तीबाट झिकेर हेरेँ । त्यसमा लेखिएको थियो- नेपाली जनताको महान् बलिदानबाट स्थापित लोकतन्त्रमा नेपालको उद्योग मन्त्री भएका राजेन्द्र महतोले उद्योग वाणिज्य संघ वीरगञ्जको कार्यक्रममा अब मधेसमा पहडिया बन्न पाउँदैनौ, बस्ने इच्छा छ भने मधेसीको गुलाम भएर बस भनी सार्वजनिक घोषणा गरी तराईमा हाल भइरहेको दैनिक हत्या, अपहरण, बलात्कार, आतंकजस्ता घटना गर्ने समुदायलाई उत्साहित गरी नेपालीनेपालीबीचमा फुट ल्याई नेपाल टुक्र्याउने खेल गरेको हुँदा निजले राष्ट्रविरोधी, देशद्रोही कार्य गरेको स्पष्ट हुन्छ ।
त्यसपछि अर्को परिच्छेदमा लेखिएको छ- "तर्सथ सम्पूर्ण देशबासीहरुमा अनुरोध छ, त्यस्ता अपराधीलाई तुरुन्त बर्खास्त गरी कार्यवाही गरियोस् भनी आवाज बुलन्द पार्न भोलि (हिजो बैशाख ३०) बिहान १० बजे नयाँ बानेश्वर चोकमा उपस्थित भई यातायात ठप्प पारी राज्यलाई कारवाही गर्न दबाब दिऔँ ।"
तल पुछारमा आयोजक/प्रायोजक कसैको नाम थिएन । मात्र "आम नेपाली जनता" लेखी टुङ्ग्याइएको थियो ।
यो कागजे टुक्रा पढेपछि मेरो मन चीसो पस्यो । किनभने त्यहाँ एक गाडी कथित् "मधेसी"हरु पनि थिए । तिनीहरु त्यहाँ कहीँ जान अड्किरहेका थिए । यदि कसैगरी प्रहरीसँगको मूडभेड भयो, कसैले एक मुक्का मात्र काला वर्णका ती "मधेसी"माथि प्रहार गर्‍यो, त्यत्रो भीँडमा, भने के होला ? यो सम्झेर आङ जिरिङ्ग भयो । मलाई त केसम्म लाग्यो भने कतै एउटा "पहाडे"हरुले गरेको विरोध कार्यक्रममा अनजान "मधेसी"हरुलाई बलिको बोको बनाउन जानाजान त घुसाएको होइन ? यदि त्यसो हो भने देशभित्र कति षडयन्त्र भइरहेको छ, फुटाउन, जुधाउन, निर्दोषहरुलाई पिराउन !
त्यस्तो नहोस्, प्रार्थना गरौँ ।
उद्योगमन्त्री राजेन्द्र महतोजस्ता व्यक्तिले वीरगञ्जमा सबै आफन्त देखेछन् र सबै "मधेसी" आफन्तका बीच पहडिया बस्न नपाउने घोषणा गरेछन् । सुन्दा उदेकलाग्दो । किनभने आज विश्व ग्लोबल भिलेजमा परिणत भइसक्यो, अमेरिकाको मान्छे क्यानडा र क्यानडाका मान्छे अमेरिका बसाइँ सर्छन् । यूरोपभरका मान्छेहरु बिहान एउटा देशमा काम गर्छन् र बेलुकी सुत्ने बेलामा आफ्नो घर अर्कै देशमा आइपुग्छन् । जापानीहरुको आधा लगानी अमेरिकामा छ र ती आधा वर्ष अमेरिका र आधा वर्ष जापानमा बस्छन् । नेपालमै पनि कैयौँ विदेशीहरुले नेपाललाई कर्म थलो बनाएर बर्षौँ भइसक्यो नेपालमा बसेको !
राजेन्द्र महतोजस्ता कथित् मधेसी (म पनि मधेसीमध्ये एउटा हुँ जो दुर्भाग्यले गहुँगोरो छालाको परेँ) लाई सम्पूर्ण नेपालको नेता हुन किन मन छैन ? किन उनी मधेसको मात्र नेता हुन रुचाइरहेका छन् ? किन उनलाई मधेस मात्र चाहिएको हो ? किन सम्पूर्ण नेपालको विकास गरौँ भन्ने सोच उनलाई छैन ? यस्ता अनेक प्रश्नहरु मेरा मनमा उठे । यस्तो विचार उठेपछि के पनि लाग्यो भने कतै यसमा 'खेल' त छैन ? कतै यसमा केही राष्ट्र र जासुसहरुको 'स्वार्थ' त छैन ? सँगैमा मैले अनेक अनुहार पनि सम्झेँ, जतिबेला म कदमाहा स्कूल पढ्थेँ, त्यतिबेलाका साथीहरु निरज मण्डल, जन्नत खाँ, गोपाल झाहरुका अनुहार सम्झेँ । जोसँग टिफिनमा उनीहरुको नजिकैका घरबाट ल्याइएका खाजा खाइन्थ्यो । के अब तिनकहाँ म गएँ भने तिनले मलाई अछुत ठान्ने छन् ! या उनीहरु मकहाँ आए भने मैले तिनलाई शंकाको दृष्टिले हेर्नुपर्ने भयो ?
हा ! राजनीति !! तँ कति घृणित छस्, कति कुरुप तेरो अनुहार !!
यो के ? पत्तै नदिई यातायात अवरोध ?: चुरे भावर प्रदेशका जनताहरु यातायात अवरुद्ध पार्दै बानेश्वर चोकमा
यस्तो महान् कार्यको जानकारीमूलक ब्यानर ! ब्यानर बोक्ने नाबालक ।
बाटो खोज्दै गरेका गाडीहरु । यसमध्ये एउटा गाडीभरि मधेसी युवा तथा महिलाहरु देखिएका थिए ।
प्रहरीसँग छलफल गर्दै चुरे भावर प्रदेशका कार्यकर्ताहरु
बाधा अड्काउको प्रतीक्षा गर्दै: कुरमुरे नामक खाजाको विज्ञापन गर्दै एक भ्यान
बानेश्वरको रमाइलो फोनमार्फत् अन्य साथीहरुलाई लाइभ ब्रोडकास्ट गर्दै एक साइकलयात्री
चोकका सुरक्षाकर्मीले नपुगेपछि ओसारिएका अन्य सुरक्षाकर्मी
कठै, कोठा सराईको बिजोग !: कोठाका सामानहरु गन्तव्यतिर पुग्ने आशामा
अगाडि ब्लक छ, नजानुस्: एक ट्राफिक मोटरसाइकल चालकलाई सुझाव दिँदै
खातका खात आलुः तरकारीबजारसम्मको यात्रा
जसले जान्यो त्यसले हान्योः चोर बाटोबाट गाडी दगुराउँदै माइक्रो तथा बसका चालकहरु
किन आउँदैनन् गाडीहरु ? : बटुवाको प्रश्न आफैँसित । बबरमहलका यात्रु अझै गाडी आउला भनेर प्रतीक्षा गर्दै
त्रिपुरेश्वर आइपुग्दाः त्रिपुरेश्वर आइपुग्दा चाहिँ यस्तो दृश्य देखियो मानौँ बानेश्वरमा केही भएकै छैन । यहाँ आरामसँग गाडीहरु हुइँकिरहेका थिए, यात्रुहरु आनन्दसँग गन्तव्य पुगिरहेका थिए ।
chaos traffic demonstrations hetrosexual dance parties कर्तब्यबोध poverty fashion shows lesbians arts homosexual sex bisexual